देश कसले चलाउँदैछ ? संसद कि सामाजिक सञ्जाल !
विनय ज्याेती बिहिवार, श्रावण २, २०७६, १३:०२:०० मा प्रकाशित
नेपालमा देश तताउने दुई कुराहरु छन् । एक हो सदन अर्को हो सामाजिक सञ्जाल । संघीय संसदमा एउटा प्रस्ताव आउँछ त्यसको निर्णय सांसदहरुले गर्नै पाउँदैनन् । फेसबुक र ट्वीटरले पहिले नै निर्णय गरिदिन्छ । रेडिमेड निर्णय बोकेर सांसदहरु नयाँ वानेश्वरको भवनमा छिर्ने गर्छन् । सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई सर्वज्ञानी बनाएको छ भने गुगलले विषय विज्ञ बनाएको सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले सोच्ने गर्दछन् । त्यसैको प्रभावले देशमा ठूल्ठूला निर्णय सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले विधेयक बनाउँछ । उसले विधायीका समक्ष पुर्‍याउन नपाई समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले यसबारेमा बहस चलाउँछन् । र, कुनै प्रकृया बिना नै विधेयक फेल हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट देश चलाइने भए यत्रो खर्च गरेर चुनावको ढोङ किन गर्नुपर्‍यो ?
केही समय अगाडि दुरसंचारमा कर बढाउने सरकारको निर्णय सामाजिक संजालका कारण फेल खायो । त्यसलाई फलोअप गर्दै जाँदा गूठी विधेयक अगाडि आइपर्‍यो । मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा पनि सामाजिसक संजालकै कारण थप बहस हुन सकेको छैन ।
सरकारले गरेका सबै काममा विरोधको आवाज जोडेर राम्रा कामको पनि समर्थन नगर्ने परिपाटी विकास भयो भने देशलाई कति घाटा पर्ला ? एकछिन यसबारेमा बहस गरौं ।
कम्युनिष्ट सरकार विफल बनाउने चिन्ता
सरकारकै मन्त्रीहरु र यसका पक्षधर सांसदले कम्युनिष्ट सरकारलाई विफल बनाउन मानिसहरु लागेको बताउँछन् । सामाजिक संजालमा हुने टिप्पणीले सरकारलाई काम गर्न गाह्रो परेको विधान निर्माताहरु बताउँछन । संजालबाट आउने टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै उनीहरुले दुखेसो पोख्ने गरेका छन् ।
संचार माध्यमको द्रुत विकासले मानिसमा नकरात्मक भावनाको संचार बढेको छ । संजालमा पोष्ट गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने हेक्का नराखी गरीएका पोष्टले राज्य संचालन तहमा नकारात्मक भावना फैलाउने गर्दछ ।
सानो सानो गल्तिलाई आधार मानेर तिललाई पहाड बनाउने चलन नेपाली समाजमा अभ्यस्त बन्दै गएको छ । यसले एक अर्काको कामप्रति शंका उब्जाउँछ, काम गर्ने संयन्त्रलाई ढिलो बनाउँछ र हाल नेपालमा यस्तै भैरहेको छ ।
सामाजिक संजालबाट नीति निर्माण गरिएमा के हुन्छ ?
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगले मानिसलाई मनोटोनस बनाउँछ । यसले मानिसलाई एकात्मक बनाउँछ । एकात्मक शैलीका मानिसले गरेको निर्णय कस्तो होला ?
उता, आफूलाई बैकल्पिक बताउँदै आएका राजनीतिक पार्टीहरुले सामाजिक संजालकै सहायताले आन्दोलन चलाउने गरेका छन् । आन्दोलन चलाउनु र देश चलाउनु धेरै फरक कुराहरु हुन् । आन्दोलन चलाउन फेसबुक र ट्वीटरको पूर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, देश चलाउन सामाजिक संजालमा पूर्ण निर्भर हुनू राष्ट्र हितका लागि राम्रो होइन ।
संजालको प्रयोग बढाउनुपर्छ भन्ने भ्रम
एकाथरी मानिसले भन्ने गरेका छन्, नेतामा सामाजिक चेत हुनू जरुरी छ, जनताको मनोभावना बुझ्न, सामाजिक विषयमा घुलमिल हुन र सबै तिरबाट देशलाई चहिएको माग पुरा गर्न सामाजिक सकृयता जरुरी हुन्छ ।
केही समय अगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै तीन प्रकारका झुट हुन्छन् भनेका थिए । जसमध्ये तेस्रो झुट तथ्यांकले दिने बताएका थिए । तथ्यांकमा त झुट लुकेर बसेको हुन्छ भने सामाजिक संजालको पासोमा सरकार फस्यो भने झन कति समास्याले यसलाई जेलेर राख्ला ?
भविष्यमा पुर्‍याउनसक्ने असर/नयाँ बाटो
यस्ता पोष्ट/ट्वीटहरुले सरकार र जनताको बिचमा दुविधा बढाएको छ । मानिसमा सरकारप्रति जागेको आशा हराउँदै गएको छ । अन्ततः समाजमा नयाँ धारको विकास हुने निश्चित छ । नयाँ धारमा जाँदा मानिसमा धेरै परिवर्तनहरु आवश्यक पर्दछन् । नयाँ धार भनेको राजनीतिक धार होइन यो मानवीय चेतनाको नयाँ बाटो हो ।
नकारात्मक सोचाइबाट सकारात्मक सोचाइमा जाने सरल उपाय छैन । यो मनावैज्ञानिक कुरा हो र यसबारे बेलैमा सोच्न जरुरी देखिएको छ ।
माथि दिइएका समस्यालाई अहिले नै रोक्ने धेरै उपायहरु छन् । एउटा हो सुशानको प्रत्याभूति दिलाउनु । सरकारले आफूले गर्ने कामको विश्वास दिलाउन सके यो दुविधा हटेर जान्छ । तर सरकारले विश्वास दिलाउन नसक्नु प्रमुख समस्या भएकाले यसको समाधान बेलैमा खोज्नु आवश्यक देखिएको छ ।
सामाजिक चेतनाका नाममा देशलाई विकासको नाराबाट रोक्ने काम संजालका रुपमा भएको छ । यसलाई परास्त गर्दै राज्य संचालनमा रहेका व्यक्तिहरुले विकासको नारालाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो ।
विश्वकप क्रिकेट : पाँचौ आयोजना शुन्य जित, कसले जित्ला विश्वकप ? सन् १९७५ मा सुरु भएको एकदिवसीय विश्वकप १२ औं संस्करणमा आइपुगेको छ । १२औं संस्करणको विश्वकप इंग्ल्याण्ड र वेल्समा भईरहेको छ । इंग्ल्याण्डमा भएको यो पाँचौं विश्वकप हो । यसअघि सन् १९७५, १९७९, १९७३ र १९९९ मा भएको थियो । त्यस्तै १९८३ को विश्वकपमा पनि इंग्ल्याण्डले वेल्सलाई सहआयोजक बनाएको थियो । यो विश्वकप इंग्ल्याण्ड र वेल्स मिलेर आयोजना गरेको दास्रो विश्वकप हो । शुक्रवार, असार २०, २०७६, १९:३०:००
कमाउनकै लागि कानुन तर्फ विद्यार्थीहरुको आकर्षण फरक विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरु पनि पछिल्लो समय कानुनी क्षेत्रमा अगाडि आउन थालेका छन् । काम पाउन सहज हुने भन्दै उनीहरु अरु विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेपनि कानुन पढ्न थालेका छन् । शुक्रवार, असार २०, २०७६, १७:३१:००
एसईई पछि के बन्न कुन विषय पढ्ने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको एसईइ परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले विद्यार्थीहरु आफ्नो ग्रेड अनुसारको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धाइरहेका छन् । कतिपयलाई भने कुन ग्रेस ल्याएपछि के पढ्न पाइन्छ ? एसईई पछि के गर्ने भन्ने समस्याले सताएको छ । बिहिवार, असार १९, २०७६, १५:०१:००
रक्तदान गर्न किन हिच्किचाउने ?
उखु किसानको आन्दोलनः घनश्याम भुषालको हैसियत र मातृका यादवको नियति